Kim Jong Un oo raali gelin ka bixiyey dilka Sarkaal kasoo jeeda Kuuriyada Koonfureed! | Somalia News
Kim Jong Un oo raali gelin ka bixiyey dilka Sarkaal kasoo jeeda Kuuriyada Koonfureed!
Hogaamiyaha Kuuriya Waqooyi ayaa maanta oo Jimce ah markii ugu horeysay raali gelin ka bixiyey dilkii ay ciidamadiisa u geysteen ma’uul u dhashay dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed.
Sarkaalkan u qaabilsanaa Kuuriyada Koonfureed arrimaha Kaluumeysiga ayaa la waayey isniintii lasoo dhaafay wuxuuna watay dooni yar, waxaana la xaqiijiyey in ay rasaas ku fureen ciidamada Kuuriyada Waqooyi meel u jirta 10km xad baddeedka u dhaxeeya labada dal.
Waraaq uu Kim Jong Un maanta u diray Madaxweynaha Kuuriyada Koonfueed Moon Jae-in ayuu ku sheegay inuu ka xun yahay falkan isla markaana uu baaritaan ku sameyn doono shilkan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa beenisay war kasoo baxay Kuuriyada Koonfureed khamiistii shalay oo lagu sheegay in ciidamada Kim Jong Un ay qabteen isla markaana dileen oo ay meydkiisa gubeen sarkaalkan u dhashay Kuuriyada Koonfureed.
Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa rasaas ku furay doonidii uu watay ninkaasi, rasaastaasi oo keentay inuu dab qabsado doontaasi waana been ee lama gubin meydka sarkaalkaasi ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Kuuriyada Waqooyi.
The post Kim Jong Un oo raali gelin ka bixiyey dilka Sarkaal kasoo jeeda Kuuriyada Koonfureed! appeared first on Horseed Media • Somali News.
Previous articleDadweyne careysan oo saaka dibed-bax ka dhigay degmada Ceelwaaq
Next articleWaa kuma gaasimaha cusub ee uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay warfaafinta Madaxtooyada?